GRAPES RUSLAN: SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, TAARIIKHDA TARANTA, SIFOOYINKA, CUDURRADA IYO CAYAYAANKA, SAWIR - BEERTA
Canab aan ka cabsaneynin macdan - Ruslan kala duwan
Si ay u koraan canab si aad ujirta, uma baahnid kharashyo badan ama xirfado khaas ah. Xitaa beerta beerta bilawga ah ayaa si aad ah ula qabsan doona.
Taasi waa waxa ay tahay in la sameeyo kuwa ku nool aagga dhexe, halkaasoo qabowgu ugu badnaa sanadka?
Kalluumaysatadu waxay leeyihiin waqti dheer oo si guul leh ula qabsadaan dhibaatadan - waxaa jira noocyo canab ah oo aan ka baqaynin heerkulka sigaarka.
Mid ka mid ah noocyada kuwaas - Ruslan.
Ruslan waa muraayad jajab ah oo ku yaalla canab buluug ah Bisaylkiisa hore. Harvest ayaa laga saari karaa horraanta Agoosto. Waxay ku sii jiri kartaa duurka muddo dheer, laakiin sonkorta sarreysa looma heli karo.
Noocyada Bisaylkiisa hore waxay sidoo kale yihiin Miracle White, Jubilee Novocherkassk, Fircoon iyo Sangiovese.
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa bacalka khamriga cas, iyo macaanka, liinta, jamciyada, laakiin badanaa waa cusub sababtoo ah dhadhanka miraha qaniga ah leh qoraallada kala duwan. Berry ma burburin, ha iskama wada. Caadi ahaan joogtaynta gaadiidka iyo kaydinta, oo ku xiran xaaladaha.
Canab Ruslan: sharaxaadda kala duwanaanta
Kuurku aad ayuu u xoog badan yahay. Kooxdu waa mid aad u weyn, miisaankeedu yahay kiilo, dhexdhexaad ah, cufan. Ma ujoogaan digir. Berry waa weyn, oval, miisaankiisu yahay 10-15 g, buluug madow leh hargab cadaan ah.
Pereyaslavskaya Rada, Charlie iyo Angelica sidoo kale maaha miisaan.
Jirka waa mid casiir leh, cufan, oo leh 1-2 miraha sare ee heer sarre leh ee gudaha. Maqaarku waa cufan, dhumuc dhexe, cuno.
Ubaxa waa hermaphrodite. A caleemaha shukulaatada midabka leh, mid adag, oo ku daboolma casaan cas oo mugdi ah. Boorka miraha waa midab-cagaaran, oo muddo dheer. Caleen waa weyn, wareegsan, dhalaalaya dhalaalaya, wax yar ka gooyay.
Sawirrada canab ah Ruslan:
Ruslan waa noocyo yar yar oo laga helo dhaqamada waalidka Kuban iyo Zaporozhye Gift. Hadda waxaa lagu qaybiyey gobollada koonfureed ee Midowga Soofiyeeti hore loo baadho Belarus, laakiin jilayaasha ayaa sheeganaya in uu si sahal ah u awoodi doono in uu xidid ku yeesho hareeraha dhexe, xaq u yeelashada Ural iyo Siberia.
Ruslan waa mid aad u qaali ah, xitaa burooyinkeeda qunyar socodka ah iyo kore. Sida caadiga ah waxay ku xiran yihiin sadexda inflorescences on biqil. Geedka canabka ah wuxuu ku dhowaadaa gebi ahaanba, oo dhererkiisu dhan yahay koritaanka.
Waxay u baahan tahay gundhin ilaa lix illaa sid oo indhaha ah, iyagoo ka tegaya qiyaas ahaan 35 kiilo. Waa baraf u adkaysta, waxay ku haysaa "maya" ilaa 23 darajo Celsius.
Gobolada heerkulbeeggu hoos u dhaco - 16, waxay u baahan tahay hoy adag.
Quruxda Woqooyiga, Fikradaha dheeraadka ah iyo Pink Flamingo ayaa sidoo kale gaar ahaan u adkeynaya barafka.
Miyuu jecel yahay qoyaan xad dhaaf ah, inkasta oo aan u jilicsanayn. Wuxuu si fiican u dareemaa daryeel dheeraad ah foomka dharka. Aad u fiican "saaxiibtinimo" leh kaydka.
Boqolkiiba heerka sonkorta ee Ruslan waa 18 Brix; heerka acidity ku dhowaad 6 g / l. Ha ka baqin xuun, ama caleemaha cagaaran, ama kor u kaca (oidium iyo caarada). Cadaadiska phylloxera ayaan wali la go'aamin.
Ruslan waa geesi dhab ah. Ma uusan ka baqin boombalooyin ama bakteeriya. Shimbiraha, laga yaabee, in la boodo. Iyaga oo iyaga, waa ku filan si ay u deyrka beerta galay a mesh awood adag oo awood leh unugyada yaryar.
Noocyada xadhigga kalluumeysiga, waxaa fiican in aanad isticmaalin haddii aadan rabin inaad hesho "goosashada" joogta ah qaabka wadnaha qaylinaya, qaylada iyo shimbiraha dhintay. Waxaa sidoo kale fiican in aan lagu tiirsanayn qashin-qaadida iyo cabsigelinta farshaxanka iyo kubadaha leh wejiyado yaryar oo midabyo leh oo indhaha ah iyo qaniinyo.
Phylloxera waa cadaw aad u khatar badan canab ee dhammaan meelaha ay ku koraan. Way adagtahay in la dagaallamo, gaar ahaan mashiinka qamriga oo aan wax khasaare ah keenin, laakiin kumbuyuutar disulfide ah.
Xaabood ayaa lagu buufinay xalka ayadoo loo eegayo qiyaastii 300-400 cubic cubit halkii mitir labajibbaaran. Waxa kale oo ay waxyeello geedka canabka ah laftiisa, laakiin waxaa ka wanaagsan inaad bixiso qaybta bukaanka ah ee ka badan beerta oo dhan - aphid laftiisa ma noqon doonaa ka dambeeya. Si kastaba ha noqotee, qiyaas ahaan 80 "kiilo" oo ay soo jeediyeen beeraley badan, baadiyaha waxay leedahay fursad kasta oo ay ku noolaan karto.
Weerar kale oo cabsi ah waa kansarka bakteeriyada. Waxay ku dhacdaa meelaha dhibta leh. Sababtoo ah ka hor intaadan iibsanin waa lagama maarmaan in si taxadar leh loo baaro guntinta boogaha iyo xagashada. Canab beerto, geedo waa ka wanaagsan tahay inaanan mar kale dhicin oo si taxadar leh u ilaalino - buro ayaa ka imaan karta waxyeello kasta. Bukaanka bukaa waa la xoqay oo gubay.
Sida cudurrada caleemaha sida caadiga ah sida anthracnose, bakteeriyada, chlorosis, rubella, qaar ka mid ah tallaabooyinka ka hortagga ayaa laga yaabaa inayan waxyeello lahayn.
Grapes Ruslan - waa hadiyad dhab ah dadka degan bartamaha dhexe, gaar ahaan kuwa bilawga ah iyo kuwa aan rabin in ay ku qaataan dadaal badan beerta. Wuxuu yahay mid aan qabyo ahayn, oo aan ka cabsanaynin dulin, ama xitaa qashin, taas oo si fudud u fududaynaysa hawsha kuwa go'aansaday in ay mucjiso ka helaan goobta.